Home / Interior design / Hazo mainty fotsy fotsy sy fotsy fotsy, lamba tsotra | Aizhu Design
2020 / 10 / 15 FisokajianaInterior design 1552 0
Estetika miasa / Fikambanana ho an'ny famoronana anatiny
Ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny habakabaka, ny fifantohana bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny lanjan'ny habaka.
Any Nanjing ity raharaha ity. Andriamatoa Zhou dia matihanina amin'ny informatika izay matetika mila miasa mihoatra ny ora ary mila ny fandinihana mihoatra ny fahitalavitra mba hialana sasatra, noho izany ny "olona-orient" no endrik'ilay habaka honenana. Lohahevitra mandrakizay, noho izany ny efitrano fandraisam-bahiny dia tsy mitovy amin'ny fomba nentim-paharazana "sofa + latabatra kafe + backdrop amin'ny fahitalavitra" famolavolana seta telo. Ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fianarana dia faritra miasa roa ao amin'ny toerana iray, tsy miankina sy mifampiankina hihaona amin'ny sehatry ny asan'ny birao fandalinana sy ny efitrano fandraisam-bahiny handinihana ny hakanton'ny maso eo amin'ny fifandraisana, ny fomba fampifangaroana ny endrika maoderina sy ny toerana azo ampiharina no ifantohana. ny famolavolana an'ity tranga ity. Nandritra ny fizotry ny famolavolana dia nilaza mazava Andriamatoa Zhou fa ny trano vaovao dia tokony ho afa-po ampy handehanan'i Still. Taorian'ny fanavaozana, tian'ilay vehivavy ny vokatra farany, ary Andriamatoa Zhou dia naneho ny fankasitrahany ilay mpamorona rehefa nifindra izy. Ity taona, voninahitra ho anay ny mandray anjara amin'ny famolavolana haingon-trano ao an-tranonao vaovao, ary nanatri-maso ny fitiavanao mamy sy falifaly, ny Fitiavana mandrakizay.
Ny habaka tsotra sy madio tsy misy haingon-trano be loatra dia mety hahatonga ny olona hilamina sy hankafy ny fiononana sy fiadanan-trano. Ny loko lehibe amin'ny mainty, fotsy ary fotsy dia madio sy vaovao, ary ny faritra midadasika fotsy dia manome fahalalahana sy fahaizan-toerana, raha ampiana kosa ny loko hazo hanamafisana ny hafanan'ny habaka. Ny famolavolana jiro tsy misy fotony dia nanjary be mpampiasa, miaraka amin'ny fiovan'ny fotoana, ny fangatahana fahitalavitra dia mihaosa sy mihamalemy, ny tontolon'ny TV dia tsy ilaina intsony amin'ny fianakaviana tsirairay.
Ny fianarana dia nafindra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mba hampitomboina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fiainan'ny tompon-trano, natokana ho an'ny tsirairay ny votoatin'ny fanaingoana manokana, manatsara be ny fampiasana ny habaka. Mandritra izany fotoana izany, ny valindrihana dia natokana ho an'ny lambam-panadihadiana, ka aorian'ny asa be atao sy fandalinana mavesatra dia afaka mijery lalao baolina na sarimihetsika ianao, mba hialana sasatra amin'ny vatana sy saina.
Ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fianarana dia faritra miasa roa mitambatra ho iray, tsy miankina sy mifampiankina toerana, samy maoderina endrika sy habaka practicality. Loko matevina simenitra matevina nostalgika, manome ny olona ny tontolon'ny indostria amin'ny fahatsorana, miaraka amin'ny lahy sy ny vavy, miampy ny firafitry ny hazo mifangaro amin'ny fampiononana fotsy madio, mba hamoronana vokatra tsotra hita amin'ny fahatsapana mandroso.
Ny endrika latabatra L dia tsotra sy malama, ny maso dia nitarina, fa koa mba hampihenana ny monotony ny latabatra monogram sy ny mahazatra. Ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ny talantalana miloko hazo dia taratry ny fanirian'ny tompony fiainana tsy misy fetra, ny tahan'ny volamena an'ny 1: 1: 1.62 fisarahana dia mahatonga ny firafitra mahitsy sy tsotra ho tsara tarehy sy mifototra kokoa. Ny fanampiana ny tsipika mitsivalana vy tsy misy fangarony dia mamelatra ny halalin'ny habakabaka, manapaka ny henjana sy ny monotony amin'ny habaka amin'ny fomba tena tsotra.
Ny maitso mainty dia ankafizin'ny tompon-trano, ary manantena izy fa hanampy azy amin'ny endrik'ilay trano vaovao nefa tsy hihoatra izany. Ny famenoana ny filan'ny mpibizina sy ny fanomezana azy ireo ny maha-izy azy, ary avy eo manenjika ny fampisehoana ny habaka, no fototry ny endrika. Ny fitsambikinan'ny maitso mainty dia mahatonga ny loko mainty sy fotsy ary volondavenona amin'ny endriny mavitrika sy mavitrika kokoa, ary manohy ny kalitaon'ny toerana mangina sy ambany. Ny talantalana miloko hazo dia mifamatotra amin'ny rindrina amin'ny lafiny iray, ary ny lafiny iray hafa dia ampidirina ao amin'ny fitaratra haingon-trano amin'ny fampiasana ny teknika anelanelanana amin'ny famolavolana aritrano. Ny fampidirana ny fitaratra maodely avy amin'ny façade dia nahavita ny fizarazaran'ireo faritra roa tsy mitovy fampiasa, ny taratry ny fitaratra fitaratra mba hamoronana eritreritra, fa koa manitatra ny sakany hita maso, manatsara ny halalin'ny saha.
Eo anelanelan'ny efi-trano faharoa sy ny làlambe, misy faritra roa samy hafa miasa amin'ny fizarana fitaratra tsy misy rafitra. Ny habetsaky ny vera dia mampitombo be ny jiro voajanahary ao amin'ny faritry ny lalambe, manitatra amin'ny fomba mahomby kokoa ny toerana hita maso ho malalaka kokoa. Ny fahalemen'ny hazo dia manala ny hatsiaka amin'ny fotsy hamoronana fampiononana sy hafanana, ary ny fahadiovan'ny habakabaka dia manentana. Ny kabinetra fitehirizana mihoampampana dia mampihena ny fitohanan'ny habaka, ary ny fampidirana ny famolavolana gorodona marbra dia mampitombo ny layering sy ny fahazavana ao amin'ny habaka. Ny famolavolana talantalana misokatra eo amin'ny sisin'ny kabinetra fitahirizana dia manolo ny fiasan'ny latabatra am-pandriana ary afaka mametraka haingon-trano na boky hatoriana, na tsara na azo ampiharina.
Ny fiantraikan'ny maso ny loko maitso maitso amin'ny efitrano fisoloana fidirana dia manamafy ny fahatsapana fombafomba rehefa miditra ao an-trano. Ny felam-boninkazo vita amin'ny laminate vita amin'ny hazo sy ny vy mainty dia mampiseho ny fahatsapana tsipika, mahatsapa ny fifandonan'ny marefo sy marokoroko, fohy sy malala-tanana mba hamoronana fahatsapana habaka mandroso, mahatoky amin'ny asan'ny habakabaka ilaina hihaona amin'ny maha-azo ampiharina ny akanjo sy ny fitehirizana kiraro. Ny latabatra marbra fotsy jazz dia ampiasaina hametrahana ireo kitapo, fanalahidy sns, miaraka amina fotony malefaka, ny tsipika mafy dia mampiseho ny herin'ny heriny ary manala ny hafanan'ny hazo. Ny varavarana misosa amin'ny efitrano lamba dia mandray ny fitambaran'ny vera avana sy ny fitaratra fitaratra amin'ny endrika varavarana misosa sy fitaratra fiakanjoana, ny fiasan'ny fitaratra ary manitatra ny toerana, ka nahafatesana vorona telo tamin'ny vato iray.
Ny habaka ao an-dakozia dia mbola loko mainty sy fotsy fotsy fotsy tsy manam-potoana, ny firafitra mahazatra an'ny kabinetra miendrika L miaraka amina fizarazaran-tsarimihetsika matevina sy antonony, fanasana vilia lovia sy kabinetra ho iray, tsara sy azo ampiharina ary manatsara ny kalitaon'ny fiainana.
Ny efitrano fatoriana tsotra sy milamina dia ahafahan'ny olona mankafy mangina sy milamina lavitry ny tabataba, ary manazava ny fiainana milamina izay miroborobo sy milamina. Ny feon'ny hazo volondavenona dia mampiseho ny hakanton'ny tsy firaharahana voajanahary, mamorona toerana izay samy milay sy mafana. Ampifanaraho amin'ny rindrina tsy misy famolavolana lohan-doha, miaraka amina fonosana sarotra tsotra misy rindrina rindrina vita amin'ny hazo ho lasa ambadika, toa madio sy tsara kalitao kokoa ny habaka. Ny habe samihafa amin'ny ampahany amin'ny fizarazarana mba hamoronana haingon-tsipika tsotra sy matanjaka, ny zavakanto amin'ny fifandraisana an-tsary dia taratry ny fahatsapana ny famolavolana antsipiriany. Ny latabatra fandriana mihoampampana vita amin'ny tranokala ary ampidirina ao anaty fitafiana dia mitazona ny talantalana misokatra sy ny fitehirizana ny latabatra fandriana, manatsara ny fahatsapana ny firafitra sy ny famolavolana ny habaka, hita taratra ny fahasamihafana sy ny fahafaha-mamolavola ny endrika.
Etsy ankilan'ny lohan'ny farafara, ny endrika veneer hazo dia fanodinana endrika miendrika L, ny endrika habaka fonosina dia manome fahatsapana filaminana ho an'ny olona. Ilay chandelier linear mitsangana dia manitatra ny halalin'ny habakabaka, ka mahatonga ny haavon'ny anatiny ho toa ambony kokoa. Ny fiainana lavorary hananana hazavana, miaraka amin'ny fiovan'ny orientan'ny masoandro, ny masoandro amin'ny alàlan'ny fitaratra lehibe mandeha ao afovoany mba hanomezana jiro tonga lafatra, miaraka amin'ny rivotra kely malefaka, tsara tarehy indrindra ny toe-tsaina.
Ny loko mainty sy fotsy fotsy mahazatra dia ny efitrano fandroana ny fahatsapana fandrosoana amin'ny fomba miharihary, ny lovia fatratra sy ny andalana fidiovana amin'ny rindrina dia mampihena ny fananganana zoron'ny fahasalamana mety kokoa hikarakarana. Io no fomba tsara indrindra ahazoana manararaotra ny habaka, ary io no fomba tsara indrindra ahazoana manararaotra ny habaka rehetra.
▲ Ny firafitra voalohany
Ny karazana trano misy efitrano fandroana roa misy efitrano fandroana roa dia somary milamina sy milamina ary ny efitrano fatoriana roa dia notehirizina mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tompony saingy tsy nanana ny fandalinana. Eo ambanin'ny fepetra ahazoana antoka ny fangatahana fototra dia nanao fanitsiana ny karazana trano ilay mpamorona:
1. ny rindrina teo anelanelan'ny efitra fisakafoana sy ny fandroana dia nifindra ho amin'ny ankavia 60 sentimetatra, ary ny famolavolana ny lakozia Andrefana dia natao mba hampitomboana ny fitehirizana ny efitrano fisakafoanana;
2. ny ampahany amin'ny habaka dia navotsotra tao amin'ny trano fidiovana ho an'ny efitrano fisakafoana, ary ny sehatry ny fitaovana dia nampidirina tao amin'ny efitrano fidiovana mba hampitomboana ny famolavolana ny faritra fandroana;
3. nilaozana ny rindrin'ny tontolon'ny fahitalavitra ary nafindra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny fandinihana, ary tamin'izany fotoana izany dia natokana ho an'ny fianarana ny valindrihana.
4. Ny rindrina eo anelanelan'ny efi-trano faharoa sy ny làlambe dia zarazaraina amin'ny vera tsy misy rafitra mba hampitombo ny jiro voajanahary ao amin'ny làlambe.
Huizhu Space Design dia masoivohon'ny serivisy matihanina manome endrika anatiny, fanatanterahana fanamboarana ary fanaka malefaka ho an'ny toerana honenana avo lenta. Hatramin'ny niorenany, ny ekipa lehibe dia nanaraka hatrany ny volavolan-kevitry ny "estetika miasa / trano", nandika ny maha-izy azy sy ny safidiny tamim-pitandremana, nanantitrantitra ny fampidirana tonga lafatra ny famolavolana fiainana sy ny fahafinaretana kanto amin'ny fiainana, ary nampiasa ny fiteny kanto ary ny fomba fanehoana ny maritrano, ao anatin'izany ny habakabaka, ny hazavana, ny refy, ny loko sns., mba hiara-manangana habaka anatiny izay misy ny fiononana sy ny tsiro. Ny studio dia mahazo kaomandy isam-bolana voafetra, azafady mialoha fotoana.
2019 Jintang Award China Interior Design Design Miavaka isan-taona
Fandraisana an-tanana isan-taona ny tanànan'ny trano tsy miankina any Shina 2019 Nanjing Top 10
2019 China Private Residence Design isan-taona 100 maso misongadina trano fonenana tsy miankina
Voninahitra isan-taona an'ny voninahitr'i Builders any atsinanana atsinanana
Loka famaranana famokarana lozisialy any China Humanities Award 2019
2019-2020 Ohatra lalina momba ny endrika anatiny (trano) trano fonenana lalina
Fifaninanana famolavolana toerana tsara kokoa any Shina 2018 TOP 100
Loka momba ny endrika afovoany an-trano ho an'ny taona 2018 an'ny Builders
Previous :: Ny habakabaka no hatsaram-panahy faratampon'ny minimalisma Next: Gray Senior, Avocado Green ary Champagne Pink, toerana romantika misy ny fiaraha-monina Retro sy maoderina